उनले आफू सडकमा हिडिरहेको बेला एक युवाले यस एडल्ट फिल्ममा अभिनय गर्नको लागि आग्रह गरेको बताइन् । उनले भनिन् ‘कसैले मलाई तिमी निकै राम्री छौं । के तिमी मोडपिलङ गर्न चाहान्छौं ? र तिमीसँग सुन्दर शरीर छ । मलाई लाग्छ तिमी नग्न मोडलिङमा फिट हुन्छ्यौं । त्यसपछि म स्टुडियो त्यहाँको वातावरण निकै सम्मानजनक थियो । मलाई त्यहाँको वातावरणले असहज बनाएन । म पहिलो पटक स्टुडियोमा गए पनि पोन फिल्म भने पहिलो पटक खेलेको थिइन । त्यो मेरो दोस्रो पटक थियो । पहिलो पटक मलाई कसैले सिधै ‘तिमी यो काम गर्न चाहान्छौं ? भनेर सोधेका थिए । मलाई त्यो प्रस्ताव कुनै केटीले गरेकी थिइन् । तर, दोस्रो पटककले प्रस्तावपछि म यो क्षेत्रमा लाग्न पुगे ।’
लेबनानमा जन्मेकी २६ वर्षीय खलिफा हाल स्पोर्टस् कमेन्ट्रि गरिरहेकी छिन् ।